စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးစီမံကိန်း (မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ အစီအစဉ်) အရ ရလဒ်အခြေပြုဘဏ္ဍာငွေ ထောက်ပံ့ပေးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဌာနထံမှ သိရသည်။
ယင်းစီမံကိန်းအရ ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့်ကုမ္ပဏီ ၆ ခုနှင့် လုပ်ငန်းသဘောတူညီမှုစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့က ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရလဒ်အခြေပြုဘဏ္ဍာငွေ ထောက်ပံ့ပေးရေးစီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် Solar Home? Solignite Myanmar? OV Solar Myanmar? Greenlight Planet Myanmar? Mandalay Yoma Energy နှင့် Earth Renewable Energy ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းသဘောတူညီမှုစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် Lighting Global က သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အသွေးရှိသည့်ပစ္စည်းများဖြင့် မဟာဓာတ်အားပြင်ပ ကျေးရွာများတွင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကာ ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံကာလ ၂ နှစ်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းစီမံကိန်းထံမှ သိရသည်။
အာမခံကာလအတွင်း ချို့ယွင်းပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက တပ်ဆင်ပေးသည့်ကုမ္ပဏီက အိမ်တိုင်ရာရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရမည့် Door to Door ဝန်ဆောင်မှုပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းစီမံကိန်းအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ GPOBA နှင့် ESMAP အဖွဲ့တို့၏ ထောက်ပံ့ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၄၅ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကာ စီမံကိန်းကာလမှာ တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းအရ လူဦးရေ ၄ ဒသမ ၅ သိန်းခန့်ကို အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ကျေးလက်ဒေသ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ World Bank၊ IFC နှင့် စီမံကိန်းအရ မီးလင်းရေးဆောင်ရွက်မည့်ကုမ္ပဏီများမှ တာဝန်ရှိသူများသည် (Video Conferencing) စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။